उच्च रक्तचाप सम्बन्धी भ्रम - उच्च रक्तचाप घट्यो भन्दैमा औषधी छोड्ने ? | Suvadin !
उच्च रक्तचाप सम्बन्धी भ्रम - उच्च रक्तचाप घट्यो भन्दैमा औषधी छोड्ने ?
Sep 11, 2019 06:45
एजेन्सी । अहिले धेरैजसोको दैनिकी धपेडीमा वित्छ । न खाने फुर्सद, न आरम गर्ने । यही दौडधूपले मान्छेको दैनिकी अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसले तनाव बढाएको छ । तनावले उच्च रक्तचाप । अस्तव्यस्त जीवनशैली र तनावले धेरैलाई उच्च रक्तचापको औषधी खानुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । धेरैजसोले अहिले उच्च रक्तचापको औषधी नखाई हुन्न ।
उच्च रक्तचापबारे समाजमा अनेक कुरा सुनिन्छ । कसैले यसलाई ‘साइलेन्स किलर’ भन्छन् । अर्थात थाहै नपाई मान्छेलाई यसले मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ । कति भन्छन्, उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिसकेपछि जीवनभर छाड्न मिल्दैन ।
यस किसिमका भ्रमले पीडितलाई अरु तनाव थपिदिएको छ । उच्च रक्तचापबारे यस्ता अनेक भ्रम समाजमा व्यप्त छ । कतिपय भन्छन्, रेड वाइनले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ । कतिपय भन्छन्, उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिरहेको अवस्थामा रक्तचाप घट्यो भने नुन सेवन गर्नुपर्छ । वास्तविकता चाहि के हो त ?
सत्य के हो ?
के उच्च रक्तचाप घट्यो भने नुन सेवन गर्नुपर्छ । नुन सेवन गर्दा रक्तचाप सन्तुलित हुन्छ । यदि तपाईं पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ भने यो गलत हो । के कारणले रक्तचाप घटेको हो वा बढेको हो ? यो कुरा हामी आफै तय गर्न सक्दैनौ । त्यसैले कुन अवस्थामा के खाने भन्ने कुरा पनि हामीले निक्र्यौल गरेर हुँदैन । चिकित्सकले जाँच गरेपछि नै रक्तचाप घट्नु वा बढ्नुको कारण खुल्छ ।
भ्रम: जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, उनीहरुले भने नुन कम खानुपर्छ ।
कुनैबेला रक्तचाप घट्न सक्छ । यदि रक्तचाप घट्यो भन्दैमा औषधी खान छाड्ने भन्दा पनि चिकित्सकको परामर्श लिनु आवश्यक छ । के कारणले रक्तचाप घटेको हो ? औषधी छाड्न मिल्छ वा मिल्दैन ? चिकित्सकले आवश्यक परीक्षणपछि भन्न सक्छन् ।
भ्रमः वाइन मुटुको लागि राम्रो हो । त्यसैले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा पनि यसले सघाउँछ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि वाइन सेवन उपयुक्त हुन्छ भन्नु पनि भ्रम हो । वाइन एक मदिराजन्य पेय हो । यसले शरीरमा नकारात्मक असर नै गर्छ, जसरी अन्य मदिराले गर्छ । अतः उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि स्वस्थ्य र सन्तुलित जीवनशैली नै सर्वोत्तम विकल्प हो । चिन्तारहित जीवन अपनाउनुपर्छ, सुपाच्य खानेकुरा खानुपर्छ, सक्रिय जीवन विताउनुपर्छ ।
भ्रमः टाउको दुखाई उच्च रक्तचापको लक्षण हो
टाउको दुख्नसाथ उच्च रक्तचापकै संकेत हो भनेर भन्न सकिदैन । सत्य चाहि के हो भने तपाईंलाई कुनै किसिमको पीडा भयो भने त्यसले मुटुको धड्कन बढ्न सक्छ ।
भ्रमः उच्च रक्तचापको रोगीले रक्तदान गर्न सक्दैन
उच्च रक्तचापको समस्या भएकाले पनि रक्तदान गर्न सक्छ । उच्च रक्तचापको औषधी र रक्तदानबीच कुनै समबन्ध छैन । यद्यपी रुँघा लागेको बेला, पेटको समस्या भएको बेला, एन्टिबायोटिक लिइरहेको बेला चाहि रक्तदान गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।